Jose Mourinho oo Salaan u saaray Jurgen Klopp kaddib Xasuuqii ay xalay Liverpool u geysatay Barcelona – Gool FM
(England) 08 Maajo 2019. Jose Mourinho oo xalay falanqeynayay kulankii Mucjisada ay Liverpool ugu soo baxday Finalka Champions League kaddib markii ay afar gool ku xaaqday Barcelona ayaa ammaan ugu qubeeyay tababare Jurgen Klopp.
Jose Mourinho ayaa dhinac iska dhigay xifaaltankii kala dhexeyn jiray Klopp isagoona u ammaanay si waali ah.
“Waxaan iri ma jiraan wax aan suuro gal ahayn, waxaana iri haddii ayba suuro gal jirto, Gegada Anfield waa garoon ka mid ah garoomada waxa aan suuro galka ahayn suuro gal looga dhigo,”, Jose ayaa sidaa yiri mar uu kulanka ka falanqeynayay hilinka caanka ah ee beIN Sports.
“Laakiin aniga ahaan hal qof bis ayaa suuro galiyay midan waana Jurgen Klopp.
“Waxaan aaminsanahay in tani aysan ahayn Taaktiko, ma ahan Falsafad, tani waa ruuxiyad, xushamad iyo damqashada uu Klopp ka dhex abuuray ciyaartoydiisa.
“Waxay khatar ugu jireen in kal ciyaareed cajiib ah ay kala soo laabtaan gacmo maran, iminkana hal talaabo ayay u jiraan in loo caleemo saaro Champions League.
“Laakiin waxaan aaminsanahay in Klopp uu midan suuro galiyay, tani waa miraha shaqsiyadiisa ee ku dhisan inaan marna la isdhiibin, ruuxiyad dagaal, ciyaar kasta wuxuu bixinayaa wax kasta.
“Klopp uma ooyo ciyaartoy ka maqan, Ma ooynayo maadama uu ciyaarayo 50- ama 60 kulan xilli ciyaareedkiiba.
“Tababarayaasha kale ee horyaalada kale way ooynayaan, waxay leeyihiin ciyaartoydeena kulamo badan ayay ciyaarayaan kolkaa oo ay ciyaarayaan 30 ama 35-kulan oo qura.
“Waxaan iminka rajeynayaa in Jurgen Klopp uu ugu dambeyn ku guuleysto Champions League.
“Maxaa yeelay wuxuu ku guul darreystay labo Champions League Final iyo Europe League.
“Waxaan aaminsanahay inuu u qalmo inuu markan ku guuleysto, maxaa yeelay shaqada uu soo qabtay waa mid cajiib ah.”.
Madaxweynaha kooxda Barcelona oo faallo ka bixiyay mucjisadii xalay ka dhacday garoonka Anfield